काँग्रेसले भन्यो –“नेपाल देशमा सरकार छ ? छ भने कहाँ छ ?” | Sagarmatha TVSagarmatha TV काँग्रेसले भन्यो –“नेपाल देशमा सरकार छ ? छ भने कहाँ छ ?” | Sagarmatha TV
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार पुर्णत असफल भएको टिप्पणी गरेको छ । कांग्रेसले वर्तमान सरकार गठनको ९ महिनाको अवधिमा देशमा सरकार भएको महसुस गर्न नसकिएको भन्दै “नेपाल देशमा सरकार छ ? छ भने कहाँ छ ?” भनी प्रश्न गरेको छ ।
बिहिबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शान्ति सुरक्षा, सुसासन बजार मुल्य, संघियता कार्यान्वयन, राष्ट्रवाद, लोकतान्त्रिक संस्कृति, न्यायलय , संविधानप्रति अपनत्व विस्तार तथार समृद्धिको यात्रामा सरकारको प्रभावकारीता सुन्य रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “मंसिर ३ गते वर्तमान सरकार गठन भएको ९ महिना पुगेको छ । ९ महिना पुगेको यो घडीमा ‘नेपाल देशमा सरकार छ ? छ भने कहाँ छ ?’ भनेर छोटो तर कारुणीक प्रश्न सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । ”
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा नै २ जनाको हत्या लगायत अन्य जिल्लामा भएका हत्याका घटना र निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको हत्यामा संलग्न दोषिको पहिचान गर्न नसक्नुबाट शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकार पुर्ण रुपमा असफल भएको पुष्ठी भएको दाबी कांग्रेसले गरेको छ । उहाँले भन्नुभयो “सम्माननीय प्रधानममन्त्री ज्यू यहाँको रामराज्यमा निर्मलाले न्याय पाउने संभावनाको मृत्यु भईसकेको हो ? ”
सरकारले विना प्रतिस्पर्धा बुढी गण्डकी निर्माणको जिम्मा चिनीया कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णयप्रति पनि कांग्रेसले आपत्ती जनाएको छ । प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो “स्वदेशी लगानीमा बनाउने भन्दै रकम संकलन भईरहेका बेला विना प्रतिष्पर्धा विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय कम्युनिष्ट सरकारको क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद हो ? ”
कांग्रेसले वाईड बडी प्रहरणको वास्तविकता रहस्यमय बन्नु गम्भीर भएको भन्दै गहिरो छानबिन गर्न माग गरेको छ । प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो “हाई फ्लाई एक्ससंग जहाज खरिद गरिएको हो कि नियोजित रुपले नया दर्ता गरिएको सो कम्पनिले एयसबस खरिद गरेर नेपाल एयरलाईन्सलाई भाडामा उपलब्ध गराएको हो ? गम्भीर घोटालाको आशंका माथि गहिरो होस् । ”
कांग्रेसले जयनगर– जनकपुर –कुर्था रेल सेवाको उद्घाटन भारतको एक राज्यका मुख्यमन्त्रीले गर्ने निश्चित भएको विषयमा पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
तीन महिने अवधिमा सरकारलाई जस्ट पास को अंक दिएको कांग्रेसले ९ महिनामा पुग्दा फेल भएको भन्दै बार्षिक परीक्षामा सफल हुन सरकारलाई शुभकामना पनि दिएको छ ।